China Food mezuwo Gelatin ụlọ ọrụ na-emepụta | Yasin
Gelatin nke azụmahịa dị iche site na 80 ruo 260 gram gram na, belụsọ maka ihe ọpụrụiche, enweghị agba agbakwunyere, ekpomeekpo, ihe nchekwa, na mgbakwunye kemịkal. Gelatin bu ihe anakpo dika ihe oriri gelatin bu ihe kachasi nma ya bu ihe eji agbaputa ya na ikike nke imeputa ihe ndi ozo. Gelatin bu protein nke sitere na hydrolysis nke collagen anụmanụ. A na-eji gelatin nri dị ka ihe na-eme ka ị na-eme jelii, marshmallows na candies candy. Ọzọkwa, a na-ejikwa ya dị ka onye na-eme ka ahụ sie ike ma na-eme ka ọkpụkpụ na-emepụta ihe, yoghurt na ice-cream.
Jelii Ike Oge ntoju 140-300Bom
Viscosity (6.67% 60 Celsius） Nkechi 2.5-4.0
Na-asọ Chaatị Maka Production Gelatin
A na-ejikarị gelatin eme ihe n'ihi na ọ na-agba ụfụfụ, ma ọ bụ na-eme ka ọ ghọọ nke na-agbaze nwayọ ma ọ bụ gbazee n'ọnụ.
Ihe ima ima nma dika bekee gummy bekee nwere ogugu gelatin di elu. Candies ndị a na-agbaze nwayọ nwayọ nwayọ wee mee ka ụtọ swiit ahụ dịkwuo ụtọ ka ọ na-atọ ụtọ ụtọ ahụ.
A na-eji Gelatin eme ihe na-atọ ụtọ dị ka marshmallows ebe ọ na-eje ozi iji belata esemokwu elu nke sirop, mee ka ụfụfụ ahụ sie ike site na viscosity dị ukwuu, setịpụ ụfụfụ site na gelatin, ma gbochie ịchacha shuga.
Mmiri ara ehi na Desserts
Enwere ike ịkwadebe ihe ọ Geụ Geụ Gelatin site na iji Typedị A ma ọ bụ Bdị B gelatin na Blooms n'etiti 175 na 275. Nke dị elu na oge ntoju ole na ole gelatin chọrọ maka usoro kwesịrị ekwesị (ntụgharị 275 Bloom gelatin ga-achọ ihe dịka 1.3% gelatin ebe 175 Bloom gelatin ga-achọ) 2.0% iji nweta otu nha anya). Enwere ike iji uto ndị ọzọ na-abụghị sorose mee ihe.
Ndị ahịa nke oge a na-echegbu onwe ha maka oriri caloric. Mgbe nile desserts gelatin dị mfe ịkwadebe, na-atọ ụtọ ụtọ, na-edozi ahụ, dị n'ọtụtụ flavors, ma nwee naanị calorie 80 kwa ọkara iko na-eje ozi. Nsụgharị ndị na-enweghị shuga bụ nanị asatọ calorie kwa otu.
Anụ na Azụ
A na-eji gelatin na-eme ka mmiri ọgwụ, gel cheese, souse, na-apụta ọkụkọ, na glazed na mkpọ mkpọ, na ụdị ngwaahịa jellied niile. Gelatin na aru oru ka oburu ihe umu anumanu ma nye ya ihe nkpuru aru aghaghi idi. Usoro ojiji nkịtị sitere na 1 ruo 5% dabere na ụdị anụ, oke ofe, gelatin Bloom, na udidi chọrọ na ngwaahịa ikpeazụ.
Mmanya na ihe ọ Juụ Juụ mmanya
Site n'ime ka coagulant, gelatin enwere ike iji gbochie ihe ojoo n'oge imeputa mmanya, biya, cider na juices. Ọ nwere uru nke ndụ adịghị agwụ agwụ n'ụdị akọrọ, ịdị mfe nke njikwa, nkwadebe ngwa ngwa na nkọwa doro anya.
Karịsịa na 25kgs / akpa.
1. Otu poli akpa ime, akpa kpara akpa.
2. Otu Poly akpa ime, Kraft akpa elu.
3. Dị ka ndị ahịa chọrọ.
Loading Ike ：
1. na pallet: 12Mts maka akpa 20ft, 24Mts maka akpa 40Ft
2. enweghị Pallet: 8-15Mesh Gelatin: 17Mts
Ihe karịrị 20Mesh Gelatin: 20 Mts
Nọgidenụ na a tightly mechiri emechi akpa, echekwara na jụụ, akọrọ, ventilated n'ógbè ahụ.
Nọgide na mpaghara GMP dị ọcha, chịkwaa iru mmiri dị n'ime 45-65%, ọnọdụ okpomọkụ dị n'ime 10-20 Celsius. Ezi uche gbanwee ọnọdụ okpomọkụ na mmiri n'ime ụlọ nkwakọba ihe site na ịhazigharị ikuku ventilasị, ebe jụrụ oyi na dehumidification.